IPixel 4 idibene: dibana neflegi elandelayo eseziko | I-Androidsis
UGoogle ungcolisiwe ngandlela kwishishini, kwaye kungenxa yokuba iingxaki ezininzi ukuba ii-smartphones zabo zihlala zivela kwixesha labo lokumiliselwa. Oku kwenzeke kwi Pixel 3. Ewe kunjalo, ukusilela okubonisiweyo kusonjululwe ngokuqhubekayo, ngalo lonke ixesha bevela, ngohlaziyo.
Nangona kunjalo, inkampani ihlala inethuba elitsha lokumilisela iiflegi ezingcono kunye nokuvuselela ukuthembana phakathi kwabasebenzisi abacinga ukuba iifowuni zabo ziya kuhlala zinamaphutha. Ngomnye olandelayo Pixel 4, esiza kuthetha nawe apha ngezantsi ukusukela oko kuvele ukuvuza kokuqala, inkampani iqinisekile ukuba nefuthe elihle kwigama layo nakwiimarike.
Ngaphandle kokungabikho kwesiqinisekiso esisemthethweni kwifowuni elandelayo ye-Pixel iifowuni, kubandakanya IPixel 3 iLite, ecwangciselwe ukubetha iishelufa zevenkile ngaphambi kwayo IPixel 4 kunye nePixel 4 XL, amarhe okuqala kunye nokunikezelwa kwezi zixhobo zomgangatho ophezulu ngoku ziye zavela.
I-Pixel 4 idizayini
Akusiyo imfihlo ukuba uGoogle usenendlela ende ekumele ihanjwe, xa kufikwa kwindlela yoyilo lwe-smartphone. NgoLwesine, umsebenzisi we Slashleaks kwabelwane nge Umzobo wento ethathwa njengeyilo elitsha likaGoogle lePixel 4 XL. Uyilo ekuthethwa ngalo lubonakala ngathi lugcina ubunjani benkampani ngokubanzi ukusuka kumgca owamkelweyo wePixel 3. Kwaye, igcina ikhamera yeelensi ezimbini ngasemva.
Ngaphambili, ifowuni yemidlalo a Uyilo olupheleleyo lwekhusi kubandakanya ikhamera ye-lens ezimbini zokubamba, njengaleyo ifunyenwe kwifayile ye- Galaxy S10 + kutshanje thaca, njengoko kunokubonwa.
Kwizinto ezinikezelwayo sinokubona ngokucacileyo izinto zobugcisa ezibeka uphawu lwe-'G 'kunye nokujikeleza ngaphambili, kunye nezinto zekhamera ezibekwe ngasemva. Okulusizi kukuba imifanekiso yePixel 4 XL eyiyo ayilindelwanga ukuba ibonakale kwi-intanethi nangaliphi na ixesha kungekudala. Ukuba uGoogle unamathela kwisithethe, IPixel 4 kunye nePixel 4 XL zinokubetha ezivenkileni ngo-Okthobha walo nyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IPixel 4 idibene: dibana neflegi elandelayo esehovini
Iposta entsha esemthethweni ye-Oppo Reno iyavela kunye neenkcukacha ezininzi malunga nokuhluka kwayo kunye namaxabiso nawo
Lawula iinqanawa zesithuba ukwenza ubutyebi kwi-Idle Space Tycoon clicker